I-Samsung galaxy tab s8 umhla wokukhutshwa, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Tab S8, ixabiso, amanqaku kunye neendaba
Isiphelo esiphakamileyo Isamsung Umgca weGalaxy Tab S ngowona kuphela ukhuphiswano lokwenyani apile & iapos; s i-iPad, ebonelela ngeyona nto ibalaseleyo kumava eethebhulethi ye-Android. Ngomboniso oqaqambileyo, inkxaso ye-S Pen stylus kunye nenani lezinto eziluncedo zesoftware ye-UI, i-Galaxy Tab S ilawule imarike yeethebhulethi ye-Android kangangexesha elithile.
Kwaye ngoku ngo-2021, i-Samsung ilungiselela ukumilisela ukongeza kwayo okutsha kuthotho lweTab S kunye neGPS Tab S8. Nantsi yonke into esiyaziyo malunga nale tablet ye-Android ezayo ukuza kuthi ga ngoku.
I-Samsung Galaxy Tab ye-S7 Lite-enye indlela engabizi kakhulu
Uvavanyo lwe-Apple iPad Pro 2020
Ixabiso le-Samsung Galaxy Tab S8
Malunga ne- $ 650
Akukho & apos akukho lwazi kwixabiso leGalaxy Tab S8 okwangoku, kodwa sinokuqikelela amaxabiso afanayo njengangaphambili. Ngokufanelekileyo, i-Samsung inokuyikhupha ngexabiso eliphantsi kunalonyaka ophelileyo kunye nemodeli ye-apos, njengoko le yinto eyenziwe yinkampani nge-2021 Uthotho lweGPS S21 yee-smartphones.
Umhla wokukhutshwa kwe-Samsung Galaxy Tab S8
I-Samsung Galaxy Tab S8 kulindeleke ukuba ikhuphe ekuqaleni kuka-Agasti ka-2021. Oku kuphakanyiswa yimihla yokuphehlelelwa kolu luhlu lwethebhulethi. Umanduleli wayo, i-Tab S7 yaphehlelelwa nge-5 ka-Agasti, ngelixa i-Tab S6 yaphuma nge-1 Agasti.
Iimodeli ze-Samsung Galaxy Tab S8
Embindini ka-Februwari, yatyhilwa kwiwebhusayithi ye-Samsung kunye neapos engalindelekanga I-Galaxy Tab ye-S8 Enterprise Edition iya kukhutshwa ecaleni kweGalaxy Tab S8 kunye ne-S8 Plus. Yonke into eyaziwayo ngoku malunga nale modeli kukuba iya kuba nokugcinwa okwandisiweyo nge-microSD ukuya kuthi ga kwi-1TB (1000GB) kunye nokwahluka kweselula. Kungenxa yokuba iya kuba nkulu kune-S8 +, nangona oku kukuthelekelela kuphela.
I-Galaxy Tab ye-S8 yoShishino
Uyilo lwe-Samsung Galaxy Tab S8 kunye neempawu zesoftware
I-Galaxy Tab ye-S8 iya kufana noyilo kuyo & ngaphambili, i-Tab S7 kunye ne-S7 + (eboniswe apha)
Uyilo lweGalaxy Tab ye-S8 ithathwa ngokuba ifana naphambi kwayo, i-Tab S7. Oko kuthetha ukuba imiphetho yanamhlanje, egobile, ii-bezels ezincinci, iglasi kunye noyilo lwesinyithi. Ubunzima be-apos bunokuba sisiqingatha sekhilogremu (17.71 oz).
Kwicala lesoftware, i-Samsung Galaxy Tab S8 ngokuqinisekileyo iya kuba iqhuba i-Android 11 ngaphandle kwebhokisi, kunye ne-Samsung kunye neapos ye-UI 3 enye ngaphezulu. Okokugqibela kuya kuzisa uninzi lweempawu, ngakumbi ii-S Pen stylus gestures zokukhawuleza ukuqala inqaku okanye ukuthatha skrini kunye nokuzoba ngaphezulu kwayo.
Inye yeempawu ze-UI ezinje ngeendlela ezimfutshane zikaS Pen (ngasekhohlo) kunye neePaneli zeEdge (ngasekunene) ziya kubuya kwiGalaxy Tab S8
Enye ye-UI iza neePaneli zeEdge, ezivumela ukufikelela ngokukhawuleza kwiiapps naphi na. Iipaneli ze-Edge zokusebenza zinokutsalwa zize ziphoswe kwiscreen ukwenza ukuba ukwahlula-hlula kwesikrini kwenziwe nge-app yangoku, okanye kungenjalo kungavulwa kwimowudi yefestile. Iphaneli ye-Edge iluncedo ekutshintsheni ngokukhawuleza phakathi kweapps.
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy Tab S8
Ngokwe- tipster owabelana ngeGalaxy Tab ye-S8 uqikelelo Ekupheleni kukaJanuwari, i-Samsung Galaxy Tab S8 imilinganiselo ayizukuphumelela eyahluke kakhulu kunangaphambili. Iimpawu zeTab S8 ziya kuba zezi zilandelayo:
Umboniso we-intshi ezingama-11 intshi ngesisombululo sama-2560 x 1600 kunye ne-120 Hz yokuhlaziya inqanaba
Isiboniso sokuskena kwiminwe
Inkqubo yeQualcomm Snapdragon 888
I-6GB okanye i-8GB ye-RAM
I-128GB, i-256GB, kunye ne-512GB yokugcina izinto
I-8000 mAh ibhetri ukuya kuthi ga kwi-45W yokutshaja
Izithethi ze-Quad stereo
Isinxibelelanisi semeko yebhodi yezitshixo
Ukugcinwa okwandisiweyo (microSDXC)
bhalela kwifayile ye-csv python
Umcimbi wamva nje weSamsung: Iilensi zekhamera esemva kweGPS S7 ngokumangalisayo ziyachitha
Eyona matyala e-wallet ye-Samsung Galaxy Qaphela 8